People – NOe
I would like to say…. Wow…Wow…Wow
Facebook မှာမပျော်တော့လို့ Account ကို တော်တော်ကြာကြာ Deactivate လုပ်ထားလိုက်တယ်။
ဒီနေ့မနက်မှာတော့ ပြန် Activate လုပ်ပြီး ကိုယ်လုံးဝမလုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်။
Facebook မှာ အကြွေးတက်တောင်းရတာပဲ။
ဒါပေမယ့်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ တစ်ဖက်က သူ့ရဲ့ Personality ကို Facebook ပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်တတ်တဲ့ သူမျိုးမို့ ကိုယ်လည်းဒါမျိုးလုပ်မှဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေရောက်သွားတာပဲ။
တစ်လက်စတည်း Facebook ကိုပိုအယုံအကြည်မဲ့သွားတယ်။
ကိုယ့်ကိုအကြွေးပေးရမှာကြောက်လို့ ပတ်ရှောင်နေတဲ့သူက ခရီးတွေတောက်လျှောက်သွားပြီး Facebook ပေါ်မှာကျ သူဌေးဂိုက်နဲ့ သာယာစိုပြေ ငါတို့မြေလုပ်နေတာ မနည်းမနော Postတွေ။
သူ့အမေလည်း သနားပါတယ်။ “သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း”ဆိုတာမျိုး…..ကိုယ့်ကိုတောင်းပန်ရှာတယ်။
တကယ်ဆို တောင်းပန်ရမယ့်သူက သူ့အမေမဟုတ်ဘဲ သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်သင့်တာလေ။
မြန်မာကားတွေထဲမှာပြောသလိုပဲပေါ့။ “လူဆိုတာလုပ်ရဲရင် ၊ ခံရဲရမယ်”မလား?
ပြောမယ့်သာပြောရတယ်။ ကိုယ်တွေဆိုသည်မှာ စိတ်တို ဒေါသထွက်နေတာကလွဲ သူ့ကို မုန်းသွားတာ ရွံသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။
တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ ပြီးစလွယ် ရှောင်ပြေးနေတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အံ့ဩတယ်။
ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဒီလိုလူငယ်တွေများလာရင် ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော့ ရင်လေးစရာပဲ။
ဟူး … မလွယ်ကြောတွေ။
လူတွေကလည်း ဘာတွေလား? ပဲ။
အခုတော့ Facebook ကို ပြန် De ထားလိုက်ပြီ။ Activate ဖြစ်နေရတာကို စိတ်မသက်သာလွန်းလို့။
Posted in Gossip, PeopleLeaveacomment
Now & Ever ရုပ်ရှင်အထူးပွဲပြတဲ့နေ့က Interview တွေကြည့်ဖြစ်တယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ Now & Ever က မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ အမျိုးသား ဒါရိုက်တာ ဏကြီးကိုမေးကြတဲ့ မေးခွန်းတွေပေါ့။
“သုသုကို ဇာဏ်ခီနဲ့ Ro နေတာတွေ့တော့ သဝန်မတိုဘူးလား ” ဆိုတာမျိုးတွေ။
What the F**k ပဲ။ ကိုဏကြီးမို့ ဒီမေးခွန်းကို အရေးအရာယူပြုပြီးဖြေနေတာ။
ဒီမေးခွန်းဟာ ကိုဏကြီးကို အကို ဟာ အကို့မိန်းမအလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘောထားသေးလား လို့ သွယ်ဝိုက်မေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲ။
နောက်တစ်ခုက မေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သုသု ဟာ အလုပ်ကိုအလုပ်လိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်တာကြလည်းဖြစ်တယ်။
လူတွေက အဲလိုပဲ Professional Lifeနဲ့ Personal Life နဲ့ မကွဲပြားကြတော့ဘူး။ပိုဆိုးတာက သမီးရည်းစား (သို့)လင်မယားကြားမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မဖြစ်မနေကို သဝန်တိုမှုတွေရှိကိုရှိရမယ် ဆိုတာကြီး ခေါင်းထဲစွဲနေကြတာပဲ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား သဝန်မတိုဘူးလို့ဆိုလိုက်ရင် တကယ်မချစ်ကြတဲ့သူတွေလို့ ကောက်ချက်တွေချကုန်ကြရော…
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တကယ်ချစ်မချစ်ဆိုတာ သဝန်တိုမှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျကြောင်း ၊ သက်ဆိုင်မှုလည်းမရှိကြောင်း …
နေပြည်တော်မှာ အတော်အတန်အရေးကြီးတဲ့ Project ကြီးတစ်ခုရတော့ အဲဒီ Project အတွက် စာချုပ်ကို JJ ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး လက်မှတ်ထိုးဖူးတယ်။
အဲလိုပဲ လွှတ်တော်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ Meeting ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်လောက်ထိုင်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေတုန်းကလည်း ညနေပိုင်းတွေဆို တွေ့ရာ ပလက်ဖောင်းခေါင်းအုံးပြီး နေဝင်ချိန်ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်လို့အပမ်းဖြေခဲ့ဖူးတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ထသွားထလာဖိနပ်တစ်ရံအတွက်ငွေ ၂၀၀၀ အထက်မသုံးဖြစ်တာအတော်ကြာပြီ။
ကိုယ်နဲ့သွေးမတော်သားမစပ်ပေမယ့် လစဉ်ကျောင်းစရိတ်အပြင် အဝတ်အစား ၊ မုန့်ဖိုးပဲဖိုးကအစ ထောက်ပံ့ပေးဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။
လူသိရှင်ကြား ပွဲအခမ်းအနားတွေနဲ့မဟုတ်ပေမယ့် လမ်းသွားရင်းစီးထားတဲ့ဖိနပ်ချွတ်ပေးခဲ့တာမျိုး ၊ အိမ်ရောက်မှစားဖို့ဝယ်လာတဲ့ မုန့်ထုတ်ပေးပစ်ခဲ့တာမျိုး ၊ ညနေလမ်းလျှောက်ဖို့ထည့်လာတဲ့အဝတ်ထုတ်ချပေးလိုက်တာမျိူးတွေတော့ ကြုံရင်ကြုံသလို ခဏခဏလုပ်ဖြစ်တယ်။
ငနိုးအတွက်တော့ အသက်ရှင်နေရမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ အရေခွံကောင်းကောင်းတစ်ခုထက် အများကြီးပိုသလို နာမည်ကြီးတံဆိပ်တပ်စျေးကြီးအဆင်တန်ဆာတွေထက် အဆမတန်သာလွန်ခမ်းနားတယ်။
သိဒ္ဓတ္ထဟာ စကြာဝတေးမင်းအဖြစ်ကို စွန့်ပြီး အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့တောထွက်သွားတယ်။
သိဒ္ဓတ္ထရဲ့ ချမ်းသာမှုဟာ အခုခေတ်ဘုရင်တွေလို ပါးပါးလေးမဟုတ်ဘူး။
ပြစ်မျိုးမှည့်မထင်အပျိုတော်တွေဟာ အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ရင် ခစားခွင့်မရှိ။
ဥတု ၃ ပါးအတွက် ပြသာဒ်နန်းဆောင် တွေအပြင် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ စည်းစိမ်အဆောင်အယောင်ပေါင်း များစွာနဲ့။
ရထားတဲ့မိန်းမဆိုသည်မှာလည်း လူမက နတ်မကျလှတဲ့ ဘဒ္ဒကစ္စနာ။
ဒါပေမယ့်လည်း သိဒ္ဓတ္ထက အားလုံးထားပြီး တောထွက်သွားတယ်။
အနော်မာသောင်ကမ်းမှာဆံပယ်ပြီးတောထဲဝင်တော့ တောစပ်မှာ ဆာဒူးဆိုလား ၊ သူတောင်းစားဆိုလား (မသဲကွဲတော့) နဲ့တွေ့တော့ နန်းတော်ကဝတ်လာတဲ့ နန်းဝတ်နန်းစားတွေချွတ်ပေးပြီး အဲ့သူတောင်းစားအဝတ်တွေနဲ့ လဲဝတ်သွားသေးတာ။
(တစ်ချို့ကလည်း ဗြမ္မာမင်းကဆက်သတဲ့ သင်္ကန်း ဘာညာနဲ့ အမွှန်းတင်ကြလေရဲ့။ တကယ်က အဝတ်စုတ်ပဲ။ လူ့ပြည်ကနန်းဝတ်နန်းစားတောင်စိတ်မဝင်စားတာ ဗြမ္မာသင်္ကန်းဝတ်ပါလိမ့်မယ် အားကြီးကြီး။)
ဘုရားဖြစ်တော့လည်း သင်္ချိုင်းသွားပြီး ပြည်တည်ပုပ်ပွနေကျွန်မအလောင်းက လောက်တဖွားဖွားနဲ့အဝတ်ကိုကောက်ယူပြီး ပံ့သကူသင်္ကန်းလုပ်ဝတ်သတဲ့။
အခုခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူတွေ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခမ်းအနားတွေသွားခါနီး အဝတ်ရွေးပြီးဗျာများနေတာမြင်ရင် သူ့ကိုသတိရတယ်။
နိုးနိုးချင်း Gym သွားချင်စိတ်ပေါက်တယ်။
တကယ်တော့ gym ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ စိမ်းတဲ့နေရာမဟုတ်။
ကိုယ်တွေ ဆယ်တန်းအောင်ခါစ gym စဆော့တုန်းကဆို ရန်ကုန်မှာ အခုလို gym culture သိပ်မထွန်းကားသေး။
တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်ဆော့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတောင်ရှိခဲ့သေး။
နေပြည်တော်မှာ ရုံးစခွဲတော့ gym နားလိုက်တယ်။
ဒီကြားထဲ ဟော့ပေါ့တွေမတရားစားပြီး နည်းနည်းဝလာတော့ gym ပြန်ဆော့ပါသေးတယ်။
နောက်တော့ “ဟယ် .. ဝလိုက်တာ ။ gym ဆော့ပါလား ။ဗလာဗလာ “နဲ့ လာပြောကြတဲ့သူတွေကို ရွံ့လို့တမင်ကိုမဆော့ပဲနေပစ်တာ။
တကယ်ဝတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိအောင်ပြချင်တာလည်းပါတယ်။
အခုတော့မနက်ပိုင်းတွေ gym ပြန်ဆော့တော့မယ်ဆံုးဖြတ်တယ်။
ခန္ဓာကိုယ်လှဖို့ဆိုတာ ငနိုးအတွက် မခက်ခဲကြောင်း …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကစပြီး မိတ်ဆွေအကိုတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လစဉ်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ကလေးတွေရှိတယ်။
အဲဒီကလေးတွေထဲကတစ်ယောက်က နောက်နှစ်ဆို ၁၀ တန်းတက်ပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ ကျူရှင်လစာ စုံစမ်းကြည့်တာ တစ်လကို ၁ သိန်း ၈ သောင်းဆိုတော့ လန့်ပြီးပြန်လာတယ်။
အခုဆရာမတွေနဲ့က အသားကျနေတော့ ဈေးသက်သာပါစေဆိုပြီး အခြားကျူရှင်လည်းမပြောင်းရက်ဘူးလေ။
ဆယ်တန်းဆိုတော့ ၁၂ လစာ ၂၁ သိန်းကျော်တယ်။
ကူညီပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေအကိုကလည်း အခြားကူညီနေတာတွေရှိတာသိနေတော့ ထပ်ပြီး ဝန်မပိစေချင်ဘူး။
Online မှာလည်းတက်ပြီး အလှူငွေမကောက်ချင်ပြန်ဘူး။
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမမတွေကို ရင်ဖွင့်မိတယ်။
သူတို့က ဝမ်းသာအားရပဲ လစဉ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီး တကာခံသွားကြတယ်။
ပျော်တာ ပျော်တာ ဆိုတာလေ။
သမီးကြီးလည်း ဆယ်တန်းကို နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်ပါစေ။